Taurus sy Gemini mifanentana: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana - Famantarana Zodiac
Famakiana Karatra Tarot
Taurus sy Gemini mifanentana: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana
Ka inona ny fifanarahana amin'ny fifanarahan'ny Taurus sy Gemini? Manana tifitra ve ity mpivady ity amin'ny fanaovana ny finamanana sy ny fitiavana? Misy fahasamihafana lehibe sy manaitra eo amin'ireo famantarana kintana roa ireo. Saingy, ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo no mahaliana ity pairing ity amin'ny voalohany, indrindra eo am-pandriana!
Ny fahafahan'io mpivady manao azy maharitra io dia miankina amin'ny fahavononany hiasa amin'izany. Ireo fambara kintana ireo dia tokony ho vonona hiondrika sy hiasa. Misy ny mety maharitra raha toa ka mianatra mifankahalala i Taurus sy Gemini.
Ny simia ara-batana eo amin'ny Taurus sy Gemini dia tsy azo lavina. Taurus dia tia ny endrika tsara voajanaharin'ny mpiara-miasa Gemini. Taurus mitsiriritra ny angovo tsy misy farany an'i Gemini. Gemini dia tia ny hatsaran-tarehy voajanaharin'i Taurus saingy tiany kokoa ny feon'izy ireo. Raha mbola samy milaza ny heviny ny roa tonta ary mihaino ny rehetra, dia tena misy ny fitiavana an'i Taurus sy Gemini.
Taurus sy Gemini Lisitry ny atiny
Fifanarahana Taurus sy Gemini
Ny fitiavana Taurus sy Gemini
Firaisana ara-nofo Taurus sy Gemini
Taurus Lehilahy sy Gemini Vehivavy mifanentana
Taurus Vehivavy sy Gemini Lehilahy mifanentana
Taurus sy Gemini Love Match Wrap-Up
Ny toetra Taurus dia momba ny fitoniana. Hitan'izy ireo fa tsy mahazo aina ny fiovana ka ny fitazonana ny zavatra tsy miovaova no asisihin'izy ireo hatao. Manantona Taurus miaraka amin'i Gemini miovaova sy mihoampampana ary ny sidina dia efa manidina. Gemini dia afaka manome hazakazaka tsara an'i Taurus rehefa mila izany izy ireo. Izy ireo dia afaka manampy an'i Taurus hamoaka ny tenany avy ao anaty lavaka mangitsokitsoka. Taurus dia afaka mampianatra an'i Gemini fa ny mijanona tsara sy mankafy ny fotoana dia tsy ratsy daholo.
Taurus no mifehy ny tenda. Mahay miteny tsara izy ireo. Ity fampiasa Taurean ity dia nahafaly an'i Gemini, izay hiresaka handre ny tenany miresaka. Manankarena ny resaka ary velona ny tsy fifanarahana. Mahagaga fa misy ny fihenjanana mitaona ny tsy fifanarahana. Angamba izany no mahaliana ny olona tsirairay amin'ny zavatra lazainy.
Ny fampifanarahana ireo hery amin'ny lalao fitiavana Taurus sy Gemini dia toa tsy azo atao mihitsy. Gemini no tompon'ny tsy azo zahana. Taurus ny azo tsapain-tanana. Izy ireo miaraka dia lasa 'Magicien' izay afaka mamadika ny tsy azo tsapain-tanana ho azo tsapain-tanana! Inona no lazainao? Rehefa manana eritreritra mandehandeha momba ny tetikasa na nofinofy i Gemini dia mampianatra ny fomba hanaovana ny tena zava-misy i Taurus.
Amin'ny alàlan'ny herin'ny famoronana, Taurus sy Gemini dia mahita marimaritra iraisana. Ny sisin'ny famoronana Gemini dia ho tia ny fahalalahana sy ny fahaleovan-tena avelan'ny tetikasa iraisana. Taurus dia afaka manampy an'i Gemini hametraka ny fahitana avo mba hahafahan'izy ireo ho tonga zava-misy ara-batana. Taurus dia manana maso voajanahary amin'ny zavatra tsara tarehy rehetra. Gemini dia manam-pahaizana avo lenta. Ento miaraka ireto hery roa ireto, ary manana hery mamorona tsy hay tohaina ianao.
Ny lalana mankany amin'ny fitiavana amin'ny fifandraisana Taurus sy Gemini dia sarotra. Lalao mitaky izany. Saingy, mendrika izany ny iray raha afaka manatanteraka izany izy ireo. Betsaka ny fanamby miandry an'ity mpivady ity. Mety hikorontana sy halazo ity fifandraisana ity alohan'ny hialany amin'ny tany.
mifanentana amin'ny vehivavy pisces sy capricorn lehilahy
Ny olana iray ao amin'ny fifandraisana dia ny fifampitokisana eo amin'i Taurus sy Gemini. Satria andry lehibe iankinan'ny fifandraisana ny fifampitokisana, izany dia manaporofo sakana lehibe. Rehefa miditra amin'ny fifandraisana i Gemini, dia mahatonga azy ireo ho sarotra atokisana ny faran'izay mafy. Taurus dia mitaky mpiara-miasa azo atokisana. Raha mandainga i Gemini na tsy mahatoky dia rava tanteraka ny fifandraisana.
Ny lakilen'ny fihazonana izany fifandraisana izany dia ny fitazonana ny fahatokisana tsy tapaka. Ilaina ihany koa ny mpiray antoka amin'ny fifandraisana Taurus sy Gemini hitazona ny mangarahara eo amin'ny samy izy ireo. Ny fifandraisana an-kalamanjana sy ny fizarana ny zava-drehetra dia hanampy amin'ny fisorohana ny fiheverana manahirana amin'ny fampandrosoana.
Taurus sy Gemini dia mifandray ao amin'ny efitrano fandriana. Saingy, ireo mpiara-miasa ireo dia manatona ny firaisana ara-nofo amin'ny fomba fijery samihafa. Taurus dia miresaka momba ny tontolon'ny vatana sy ny mikasika. Tian'izy ireo ny fahatsapana manaitaitra rehetra amin'ny vatana iray manontolo. Tian'izy ireo ihany koa ny fitsangantsanganana miadana amin'ny alàlan'ny foreplay.
Tsy mandray miadana i Gemini. Aleon'izy ireo mihetsika ary mandeha an-tongotra. Ahoana no fandikana izany filan'ny hetsika tsy miova izany ao amin'ny efitrano fatoriana? Gemini dia afaka mizotra haingana amin'ny foreplay mba hahazoana ny lovia lehibe. Aza manahy fa Taurus dia manana finiavana ampy hitarika an'i Gemini amin'ny fomba fanaovana fitiavana miadana. Ny lalao fitiavana Taurus sy Gemini dia tsy mandeha manelanelana ny takelaka mandra-pahatongan'ny Taurus vonona ny ho tonga any.
Amin'ny maha marika famantarana ny Air azy, mahita ny fihodinan'ny saina i Gemini. Ny resaka maloto dia mandeha lavitra amin'i Gemini. Samy manana saina maloto i Taurus sy i Gemini rehefa te ho maditra. Noho izany, tsy foana ny tsiron'ny lavanila eo amin'ny menio ho an'ny fihaonana ara-nofo! Ireo roa ireo dia tsy matahotra fanandramana kely.
Fifandraisana Taurus sy Gemini
Rehefa mifanakaiky amin'ny zodiaka ny famantarana, ny famantarana iray dia ny fivoaran'ny voajanahary ny iray hafa. Gemini dia ny fivoaran'ny Taurus. Inona no dikan'ity? Ny Gemini dia misy lafiny roa sy azo ovaina. Ny fiasa toy izany dia fiovana tsara amin'ny toetra maotina sy tsy azo ovaina Taurean. Taurus dia tsy maintsy mandresy ny stagnation na tsy fahatomombanana satria tsy tian'izy ireo ny hetsika. Gemini no mifanohitra amin'izany satria miteraka toetra mivezivezy foana.
Mazava ny fifanenjanana eo amin'i Taurus sy Gemini. Sarotra ny maka sary an-tsaina ity mpivady ity mifampiresaka tsara. Ny marina dia ireo famantarana ireo dia afaka mifampianatra lesona amin'ny fiainana ary mifanampy amin'ny fanatsarana ny fiainany. Gemini dia afaka mampianatra an'i Taurus ny fomba famahana sy ny fampitana ilay asa fialonana. Taurus dia afaka mampianatra an'i Gemini mora tohina amin'ny fomba hipetraka sy hanohitra ny fandosiran'ny sidina. Amin'ny lalao fitiavana dia afaka mifampikarakara ity mpivady ity amin'ny fifantohana amin'ny herin'izy ireo.
Miaraka amin'ny asa, mivoatra ny fifandraisana toy ny fifanarahan'i Taurus sy Gemini. Taurus dia manampy amin'ny fametrahana fahazarana maharitra sy azo vinavinaina. Ny fanarahana ny fahazarana dia mamela ny mpivady hifanerasera tsy tapaka. Raha tokony hiady hevitra momba ny fotoana iarahana ianao dia manome antoka ny fifandraisana mahazatra ny fandaharam-potoana.
Taurus dia mifandray amin'i Gemini amin'ny alàlan'ny fanalefahana azy ireo. Ny fandefasana amin'ny sakaizan'izy ireo dia fomba iray anehoana fa miahy izy ireo. Gemini tia miresaka. Handany ora maro izy ireo miaraka amin'i Taurus miresaka momba ny zava-drehetra eto ambanin'ny Masoandro. Ny andaniny roa amin'ity pairing ity dia mahay mandaha-teny ary afaka mifampikasokasoka amin'ny teny malefaka vitsivitsy.
Fifandonana Taurus sy Gemini
Taurus no mpiara-miasa hendry sy azo ampiharina. Gemini no mpiara-miasa nofinofy sy manidina. Taurus dia miantso ny herin'ny saina sy ny eritreritra azo ampiharina. Gemini dia miantso ny herin'ny saina sy ny nofinofy. Ny antoko tsirairay dia afaka mianatra zavatra betsaka avy amin'ny iray hafa raha toa ka tsy raharahiany ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo.
Ny fifampiraharahana dia ahafahan'ny Taurus sy Gemini hihoatra ny sakana sasany amin'ny fifandraisana voalohany. Taurus dia tsy maintsy manam-paharetana amin'ny Gemini manidina. Avy eo i Gemini dia mila manao izay fara heriny mba hipetraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny Taurus. Taurus dia iray izay mitaky ny fanaovana ny marina. Ny fialana amin'ny fitsipiky ny fahamarinana dia loharanon'ny olana lehibe eo amin'ny fifandraisan'ny Taurus sy Gemini.
Gemini dia nanome toky ary noho ny fisidinana dia manadino ny manatanteraka azy. Ny fampanantenana tsy tanteraka dia mitovy amin'ny lainga amin'ny Taurean. Manompo an'i Gemini tsara izy io mba hihaino tsara ny fampanantenany. Fitsipi-pifehezana tsara ho an'ny Gemini miaraka amin'ny Taurus dia 'aza manao fampanantenanao tsy hotanananao!'
Taurus dia zavaboary nentim-paharazana. Ny fahasosoran'i Gemini amin'ny fanaovana ilay taloha ihany dia mitombo. Hevitra tsara kokoa ny mifandimby andro fankalazana, fitsangatsanganana ary fialantsasatra. Ireo olona roa mafy loha ireo dia tsy maintsy mandeha dimam-polo dimam-polo amin'ny drafitra, ka rariny ny kianja filalaovana. Raha mikasa Krismasy herintaona i Taurus dia mahazo mandahatra ny taona manaraka i Gemini. Amin'ny alàlan'ny fahamarinana, ny roa tonta dia hahatsapa ho toy ny hoe manan-danja amin'ny sakaizany ny zavatra hitany fa manan-danja.
Gemini dia tokony hahay ny marina. Taurus dia tsy maintsy mahafehy ny filan'ny tongolobe. Tokony ho mora izany, sa tsy izany? Fa ahoana, tsia! Taurus mankahala ny fanovana, tsarovy. Saingy, Taurus dia tsy maintsy miala amin'ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanovana dia hiroborobo ny fifankatiavana. Mbola marina kokoa io fanambarana io amin'ny lalao Taurus sy Gemini!
Taurus sy Gemini Polarity
Amin'ny teny astrolojika, ny zodiac sign rehetra dia mifanaraka amin'ny polarity. Misy polarities roa: Yin sy Yang. Yin dia hery vehivavy ary Yang ny mifanohitra amin'izany. Taurus dia mifanaraka amin'ny angovo Yin. Gemini dia mifanitsy amin'i Yang. Izany dia manome ny Duo ho Yin Yang mihitsy na angovo lahy sy vavy.
Rehefa mifandanja dia mifameno i Yin sy Yang. Yin dia mandefitra. Yang mahery setra. Raha mifantoka amin'ny tanjaky ny iray izy mivady dia tsara daholo. Saingy, misy ny tsy fandanjana ary misy fiantraikany amin'ny fifanarahan'ny Taurus sy Gemini. Ny tsy fandanjana dia miteraka polarisasi'ny tafika Yin sy Yang.
Ny hery Yin be loatra dia mahafoy tena sy mahery setra. Tsy mandanjalanja ny angovo Yang, tia tena, tia tena ary manjakazaka na manery tena. Raha hamerina ny fifandanjana indray mandeha indray dia ilaina ny fampidirana ny hery mifanohitra. Yang mitaona an'i Gemini dia afaka mandray ny fahatsapana, ny fahalemem-panahy ary ny fandeferana. Yin dia nisy fiantraikany tamin'i Taurus fa mila manjary hentitra sy matoky tena kokoa ary mivantana.
vehivavy capricorn sy lehilahy virjina ara-nofo
Lafiny Taurus sy Gemini
Ny fampifanarahana ny famantarana zodiaka roa dia miankina amin'ny lafin'ny famantarana. Ny lafiny dia ny elanelana misy eo amin'ireo famantarana amin'ny kodiarana selestialy. Ho an'ny mpivady Taurus sy Gemini, ny famantarana ireo mpivady dia zodiaka iray misaraka. Ny famantarana tokana manasaraka an'i Taurus sy Gemini dia mamorona lafiny semisextile.
Taurus sy Gemini dia mifankatia na mifankahala. Miankina amin'ny fifandraisan'ny roa tonta izany. Raha manokatra sy manaiky ny fahasamihafana izy ireo dia mandeha am-pilaminana ny raharaha. Raha tsy izany dia vaky daholo ny helo rehetra!
Ny lafiny fitiavana Taurus sy Gemini dia manasongadina fahasamihafana lehibe eo amin'izy ireo. Ny duo dia manana fomba tsy manam-paharoa azy manokana amin'ny zavatra rehetra ataony. Miaraka amin'ny tsy fitovian'ny filalaovana dia misy disadisa marobe. Rehefa manana fifantohana marina ny disadisa dia afaka mandray anjara amin'ny fifanarahana lehibe kokoa. Efa naheno ve misy tsipika tsara eo amin'ny fankahalana sy ny filana? Izany no nitranga tamin'ny lalao Taurus sy Gemini. Na mafana, na tsia!
Ny mpivady Taurus sy Gemini dia mandany fotoana betsaka hianarana bebe kokoa momba ny vadiny. Toy ny hoe mitoetra tsy miafina mandrakizay ireo roa ireo. Ny zava-miafina kosa dia afaka mampisy ody majika amin'ny fifandraisana na izany aza. Ho zavatra hitazomana ny fifandraisana ho velona izany satria tsy hifankaleo na oviana na oviana ireo roa ireo.
Taurus dia afaka mianatra zavatra betsaka avy amin'i Gemini. Gemini dia mitarika an'i Taurus amin'ny fahatakarana bebe kokoa ny lafiny alokalony. Gemini dia afaka mianatra avy any Taurus fa ny fiorenanana sy ny fitoniana dia tsy zavatra ratsy. Tsy midika izany fa mijanona ho gadra ianao raha mihazakazaka sy afaka foana.
Rehefa misavoritaka ny fety ao amin'ny Taurus sy Gemini dia mihamafy ny raharaha. Masiaka amin'ny fo sy saina ny fisarahana. Mijanona ny lolompo rehefa tapitra ny fitiavana eo amin'ny mpivady Taurus sy Gemini.
Elemen Taurus sy Gemini
Ny takelaka zodiaka rehetra dia mifanaraka amin'ny iray amin'ireo singa efatra. Ny singa amin'ny rivotra, afo, rano ary ny tany dia mitaona famantarana zodiaka 12. Ny herin'ny singa eto an-tany dia misy fiantraikany amin'ny toetran'i Taurean. Ny singa Air dia mifanaraka amin'ny toetra Gemini.
Ny rivotra dia mifanaraka amin'ny saina sy ny tsy azo zahana. Ny tany dia mifanitsy amin'ny tontolo ara-batana, zavatra azo tsapain-tanana ary natiora. Miaraka amin'ny fitaoman'i Taurus eto an-tany, ny fanentanana sy ny fiorenan'ny tany no lohahevitra androany. Gemini dia afaka manaporofo fa manidina na miovaova. Taurus mety tsy hohetsika. Mafy hatoka, ary mahatohitra ny fiovana. Mora tafahoatra i Gemini, ka anisan'ny fanao isan'andro ny fanovana!
Na eo aza ny fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa, azo atao ny mampandeha ny fifandraisana Taurus sy Gemini. Eny, ny teny filamatr'i Taurus dia 'I Have,' ary i Gemini dia, 'I Think.' Eny, midika izany fa mitondra amin'ny fomba samihafa amin'ny latabatra izy ireo rehefa mifandray amin'izao tontolo izao. Taurus dia materialista. Gemini dia manam-pahaizana. Ento miaraka izy roa, ary manarona ny toby rehetra izy roa! Ahoana?
Ny fitiavan-karena an'i Taurus dia afaka manampy an'i Gemini haneho ny nofinofin'izy ireo. Ny faharanitan'i Gemini dia afaka manampy amin'ny fisainana amin'i Taurus maditra. Mampianatra ihany koa i Gemini fa tsy maninona ny manidina. Ny hafatra avy amin'i Gemini eto dia 'Loosen up Taurus. Mitonia!' Taurus dia mampianatra an'i Gemini ny fandraisan'izy ireo, 'Milamina, mifoka rivotra, ary mankafiza amin'izao fotoana izao.' Mba hampitomboana ny fifanarahan'i Taurus sy Gemini, ity fitiavana ity dia mila mandray ny lesona omen'ny mpiara-miasa.
Ny Gemini voataona amin'ny rivotra dia sendra mila manidina. Ny toetra Gemini dia fanahy afaka misafidy hetsika tsy ampoizina sy tampoka. Ny Gemini dia mitady traikefa nahafinaritra matetika. Taurus dia tokantrano sambatra kokoa noho ny tsy misy tantara an-tsehatra mihitsy. Raha nanana hira misy lohahevitra i Gemini, dia 'Break My Stride' i Matthew Wilder. 'Tsy hisy hahasakana ny diako, tsy hisy hampiadana ahy, tsy maintsy mihetsika aho.'
Nikiakiaka i Gemini noho ny filan'ny spontaneity. Tsy tian'izy ireo ny mijanona maharitra. Miaraka amin'ity filàna fanovana rehetra ity dia fanalàm-baraka izy ireo handroaka an'i Taurus tsy ho very saina. Tsy miraharaha firy ny tsy ampoizina i Taurus. Miroborobo amin'izy ireo i Gemini. Gemini dia manana ny fanomezana gab, ary Taurus, raha am-peo, dia tia mangatsiaka fotsiny. Raha manandrana mikasa ny hanao drafitra i Taurus dia manaparitaka ilay taratasy soratan'i Taurus i Gemini. Nikiakiaka i Gemini, 'Carpe diem dammit!'
Ilay lehilahy Taurus sy Gemini Woman dia manana tondrozotra misy fitsapana mialoha. Mahagaga fa ataon'izy ireo mihitsy ilay fifandraisana amin'ny fitiavana. Gemini dia mandeha foana. Ilay lehilahy Taurus Man dia manana diany miadana sy maharitra, noho izany ny fahaizany manaraka an'i Gemini dia fahagagana! Gemini mihetsika haingana. Taurus dia tia mandehandeha amin'ny fotoana tsirairay amin'ny fiainana mba hisotro isaky ny segondra mahafinaritra. Toa ny hoe mamaky avy amin'ny tantaram-pitiavana samihafa ny lalao fitiavana Taurus sy Gemini.
Ny lehilahy Taurus dia tsy manana olana amin'ny fahitana ny hatsaran'ny vatany Gemini. Saingy, tsara fanahy izy ary ny lafiny malefaka hitany manintona indrindra. Afaka mahita an'io izy rehefa mifanerasera amin'ny hafa. Toy ny lolo izy rehefa manidina. Mampitolagaga azy ny toetrany ara-tsosialy, ary vetivety dia raiki-pitia izy.
Ilay vehivavy Gemini dia mahita ny fihetsika tony sy matanjaka an'ny Taurus manintona. Izany dia toy ny hoe avy amin'ny natiora voajanahary nahasarika azy izay mifanohitra tanteraka aminy. Fantatry ny fanahiny izay ilainy na dia tsy fantatry ny sainy aza. Ny vehivavy Gemini dia maniry zavatra hifindra haingana koa ao amin'ny fifandraisana. Manomboka amin'ny namana ka hatramin'ny olon-tiana ka hatramin'ny fanambadiana sy ny fitaizan-jaza aotra enimpolo ka hatramin'ny enimpolo, azafady! Hoy i Taurus: 'Atsangano, atsangano, atsangano, tsy mila kilasy fitaizan-jaza vitsivitsy ve aloha?'
Ny lehilahy Taurus dia manetriketrika sy milamina. Saingy, tsy mariky ny tsy fahafaham-po izany. Manana toetra milamina sy milamina izy ireo. Ny Gemini Woman dia miresaka haingana araka izay itiavany ny tontolony. Rehefa namoaka ny zava-niseho tamin'ny androny toy ny rakitsoratra vina 78 RPM nilalao tamin'ny haingam-pandeha 33 1/3 RMP izy dia nibolisatra ny mason'i Taurus. Efa very azy izy tamin'ny minitra nandoahany ny saziny faharoa! Ny fanoherana sy ny fisintonana eo amin'ny hetsika miadana sy haingana dia taolana fifandirana tsy tapaka ao amin'ny fifandraisana Taurus sy Gemini.
Ny Gemini Woman dia mety hamoy ny hatsiaka rehefa tsapany fa tsy afaka mitazona ny vitany ny Taurus Man. Ny lehilahy Taurus dia mijanona ho mafy orina sy faharetana rehefa manandrana manazava ny filàny aminy hampiadana ny horonan-taratasy. Ho an'i Taureans, zavaboary mahafinaritra izy ireo satria i Venus no planeta fitondrany. Tian'izy ireo ny mankafy ny zava-drehetra manomboka amin'ny mozika ka hatramin'ny sakafo. Rehefa eo am-piandohana feo ilay Vehivavy Gemini, dia mihazakazaka manohitra izay rehetra voa voajanaharin'i Taurean izany.
Ny fanapahana ivelan'ny efitrano fandriana dia tsy manakana ny fanintona eo amin'ny lahy sy ny vavy eo anelanelan'ireto mpivady ireto. Ny fiarahan'ny Taurus sy Gemini dia manana fifandraisana miavaka ao amin'ny efitrano fandriana. Taurus dia zavaboary mampihetsi-po. Gemini dia iray amin'ny haingam-pandeha. Miaraka amin'ireo lafin-javatra roa ireo izay miverina amin'ny zava-mitranga rehetra ao amin'ny efitrano fandriana, ny mari-pana dia miakatra amin'ny maripana amin'ny efitrano ka hatramin'ny hafanana mipetaka amin'ny toetr'andro!
Raha mamela fahalalahana betsaka amin'ny vehivavy Gemini Woman ny lehilahy Taurus dia hiverina eo anilany foana izy. Vehivavy Gemini iray tonga manaja sy manome voninahitra azy satria misafidy ny tsy hametraka azy ny sitrapony. Tsy manana olana amin'ny fandresena ny fony amin'ny ohariny mahafatifaty izy. Nilaza i Gemini fa ny zavatra mety rehetra ary ny masony ho an'ny zavatra tsara tarehy dia mifanentana amin'ny fitiavany hatsarana. Mora manilika azy izy ary mampianatra azy hamoaka ny fisainana hentitra.
Matetika ny fifanarahan'i Taurus sy Gemini. Ny fifandraisan'izy ireo dia ny fampifangaroana ilay hazakazaka sokatra miadana miatrika ilay bitro haingam-pandeha. Ny sokatra dia tsy mikasa ny haka ny hafainganam-pandeha, ary tsy hiadana ny rary. Ny hany zavatra azon'ireto mpivady atao ireto dia ny miandry mandra-pivoakan'ny roa ny tsipika fahatongavana. Rehefa ampy ny fifankatiavana eo amin'izy ireo dia ho vonona hiandry ny androm-piainany izy ireo.
Mazava ny fifanenjanana eo amin'ny vehivavy Taurus sy Gemini Man. Tsy azo lavina ny disadisa. Na izany aza, misy ny fampanantenan'ity fiarahana am-pitiavana ity, fa tsy alohan'ny sakana be handresena aloha.
A Gemini Man and Taurus Woman dia fifandraisana mahaliana. Samy hendry sy manam-pahaizana. Samy mankafy miresaka sy miresaka mandritra ny ora maro izy ireo. Saingy, rehefa manana ny ampy ny vehivavy Taurus ary te-hidina, dia manohy miteny ilay lehilahy Gemini. Ny fanomezany ny gab dia lasa nofy ratsy ho an'ny Taurean izay mila tsiambaratelo sy fahanginana mba hampifantoka ny saina sy ny fanahy.
Ny Taurus Woman dia mifanaraka ary mifindra amin'ny tetikasa iray mankany amin'ny iray hafa. Vita ny zavatra natombony. Ny Gemini Man dia mitsambikimbikina avy amina tetikasa iray mankany amin'ny iray hafa efa ela talohan'ny nahavitan'ny zavatra rehetra. Gemini lasa mankaleo amin'ny moramora be, noho izany dia mifindra amin'ny zavatra manaraka misarika ny sainy izy. Ilay Vehivavy Taurean voarindra dia hahita fa mahamenatra ny fahoriany!
Amin'ny lalao fitiavana Taurus sy Gemini, mpikarakara tokantrano miavaka i Taurus. Ny Gemini Man dia manao izay rehetra azony atao hahazoana antoka fa Taurus Woman dia manana tontolo iainana mahafinaritra. Ny Taurus Woman dia zavaboary iray izay mahafantatra fa zava-dehibe ny fampiononana voajanahary. Ilay lehilahy Gemini koa dia mahandro sakafo mahafinaritra ho azy hanintona ny fitiavany sakafo. Raha ny natiora manidina Gemini no mitarika azy amin'ny tsy fivadihana, ny vehivavy Taurean dia hiditra amin'ny fomba feno fahatezerana. Aorian'ny fahatezerany dia hataony miasa mafy izy hahazoana ny fitokisany indray. Aleony manandrana manao ny fifandraisana ho tsara kokoa noho ny mandray ny fiovana mahery vaika ary mamela azy handeha tanteraka.
Vehivavy Taurus dia miatrika lafiny roa amin'ny Gemini Man. Farafaharatsiny mba hitazomany ny zavatra rehetra! Ny fahaizany mifindra amin'ny fomba tafahoatra dia mahatonga azy ho mora zatra, saingy tsy azo vinavinaina. Taurus dia mitresaka foana rehefa maniry ny haharitra izy nefa mahita ny zava-miafina an'i Gemini Man izay mahaliana. Ho hitany fa tsy misy fomba hifehezana ny fihetsik'i Gemini manidina. Zava-poana ny fikasana hanao izany.
Hitan'i Gemini fa tsy afaka manova ny fomban'ny Vehivavy Taurus koa izy. Ny hany tiany hataony dia ny miala sasatra ary mamela azy. Mangataka fahalalahana sy toerana hiainana izy. Arakaraka ny handosihany dia vao mainka manandrana ny milamina ny vehivavy Taurus Woman. Tonga foana ny ezaka rehetra nataony.
Ny vehivavy Taurus sy Gemini Man dia hahita fahasambarana. Ao amin'ny fanekena sy ny fangorahana. Ny antoko tsirairay ao amin'ny fifandraisana Taurus sy Gemini dia mila mifampiantra sy ny tenany. Tsy maintsy hanaiky ny fomba ifandraisan'ny raharaha amin'ny zavatra tiany izy ireo ary ny kileman'izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fanekena, ny fitiavana dia afaka manosika ao anaty korontana toy ny voninkazo lotus amin'ny fotaka.
Ny singa mifanentana amin'ny Taurus sy Gemini dia manome toky kely ny amin'ny fahombiazan'ny mpivady maharitra. Saingy, azo atao tsara io duo io handresy ireo olana ara-pitiavana atrehin'izy ireo. Ny tsy fivadihan'i Taurus sy ny fahavononany dia tsy azo resena. Rehefa fantarin'i Taurus fa zavatra tadiavin'izy ireo ny fifandraisana dia tsy misy mahasakana azy ireo tsy hanao izany. Ny faharanitan'i Gemini sy ny toetrany mora mandeha dia hanampy azy ireo hahita fomba fanavaozana amin'ny fifandraisana amin'i Taurus amin'ny lalao fitiavana.
Mahagaga ve ny tsy fitovizan'ny toetra Taurus sy Gemini? Liana amin'ny famantarana zodiak hafa ve ianao? Te hahafantatra bebe kokoa momba ny fanandroana sy ny mifanentana ve ianao? Ny kintana no sarintany mandrakizay ho an'ny olona sy ny fifandraisana! Avelao ny Astros Horoscope Daily hanampy anao hahita ny fampifanarahana ny famantarana ataonao amin'ny hafa. Ny mombamomba anao rehetra dia totozy kitiho fotsiny!
nanofy aho fa maty ny renibeko
Vakio rehetra momba ny famantarana Zodiak Gemini
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetra Gemini, toetrany, ary toetra mampiavaka azy !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Mifanaraka Gemini !
Makà fampahalalana lalina momba ny Gemini Man !
Mamaha ny zava-miafina ny Gemini Vehivavy !
Manana zanakavavy na zanakavavy Gemini? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Gemini Ankizy !
dikany an'ohatra ny loko maitso
taurus lahy sagittarius vehivavy fitiavana fitiavana
vehivavy gemini sy mifanentana amin'ny lehilahy sagittarius